EVHANGERI YEMVURA NEROPA ISIMBI INODYA DZIMWE SIMBI
Evhangeri yedu yeruponeso isimbi inodya dzimwe simbi. Muevhangeri yemvura neropa ndimo matinoona kubata kwaMwari kunoshamisa. Mwari vedu vakatiponesa nechiito chavo chekururama. Vakatauma mwanakomana wavo Jesu Kristu pasi pano nenzira yenyama yemungu. Jesu akava nekutora zvivi zvedu murwizi rweJorodani, apo akaiswa mavoko naJohane mubhapatidzi murwizi Jorodani. Akabva ava nekuroverwa pamuchinjikwa, apo ropa rake rakadeuka, zvichimirira kutongwa nekusunungurwa kwezvitadzo zvedu. MuBhaibheri tinoverenga kuti: mubairo wechivi ndirwo rufu.
Ruponeso rwatakapiwa naShe wedu nderwekusingaperi. Rwasiyana neruponeso rwatinoverenga nezvarwo muTestamente yakare. MuTestamente yakare, tinoverenga kuti neZuva guru roKuyananisira, payiitwa zviitwa zvakanga zvakafanira kuti vanhu varegererwe zvitadzo zvavo. Zuva regumi remwedzi wenomwe ndiro rakanga riri zuva guru rokuyananisira. Pazuva iri, Aroni, Muprista Mukuru, aiuya nembudzi mbiri pamberi pevungano. Mbudzi yokutanga ndiyo yaipirwa sechibairo chaMwari. Imwe yacho ndiyo yakanga iri yaAzazeri.
Aroni, Muprista Mukuru, aiisa mavoko ake pamusoro wembudzi mhenyu. Nenzira iyi, Aroni ayimirira rudzi rwose rwaIsraeri kutambidza matadzo ose avo pambudzi yechibairo. Kana mbudzi iyi ichinge yatambidzirwa matadzo ose, yaizobva yava nokuuraiwa nenzira yekuiburitsa ropa. Kuyerera kwayiita ropa iri kwakanga kuchimirira kutongwa nokusunungurwa kwezvivi zvose zvevanhu zvegore rimwechete. Iyi ndiyo nzira yokuregererwa kwezvivi yatinoverenga nezvayo muTestamente yakare. Asi zvakadaro, tinodzidza zvakare kuti iyi inzira yakava nokushanda pasungano yakare, apo Jesu Kristu akanga asati auya.
Musungano itsva yatinoverenga nezvayo muTestamente itsva, tinoverenga nezvenzira itsva yekuponeswa nayo. Jesu Kristu paakauya pano panyika, akauya segwayana rechibairo. Akava nokubhapatidzwa naJohane Mubhapatidzi, uyo wakanga ari worudzi rwaAroni, muodha yaAbija. Mukunzwisisa kwedu Testamente yakare, tinoziva kuti Vaprista vose vaigadzwa kubva kudzidza raAroni badzi. Naizvozvo, sezvo Johane wakanga ari wedzinza raAroni, ndiye akava Muprista wekupedzisira panyika.
Kuvapo kwaJohane, ari Muprista mukuru; naJesu Kristu, ari gwayana rechibairo zvinova nekutifungidza nezvenzira yekuyananisira kwezvivi, sekuverenga kwatinoita kubva munaRevitiko. Johane Mubhapatidzi akava nokubhapatidza Jesu Kristu nenzira yekumuisa mavoko pamusoro wake. Tinoziva tose kuti kuisa mavoko kwayiitwa noMuprista Mukuru (MuTestamente Yakare) nechinangwa chekutambidza zvivi zvose zvevanhu. Naizvozvo, musungano itsva yeruponeso, Johane Mubhapatidzi akaisa mavoko pamusoro waJesu Kristu kuti atambidzire zvitadzo zvevanhu vose. Johane Mubhapatidzi akanga ari mumiriri wevanhu vose, musungano itsva, kwete wevaIsraeri badzi.
Jesu. mushure mekunge atora zvitadzo zvedu, akazova nekuroverwa paMuchinjikwa, nenzira yekudeura ropa rake. Izvi zvakafananavo zvakare nekungouraiwa kwayiitwa mhuka yechibairo muTestamente Yakare, mushure mekunge yava nokuiswa mavoko. Jesu akafs, zvichizadzikisa rugwaro rwunoti: mubairo wezvivi rufu. Chikonzero nei akafa. Nokuti akanga atakura zvivi zvedu zvese. Naizvozvo aitofanira kuzvifira. Asi pane mashoko aakareva mushure mekunge ava kuda kuburitsa Mweya wake. Akava nokuti "Zvapera." Izvi zvinotiudza kuti basa rakaoma raakanga ava nokuita rakanga rava nokuzadzikiswa. Tinoona kuti basa iri rakanga rakaoma zvikuru nokuda kwezviitiko zviviri zvekuzengurira zvakava nokuitwa naJesu. Chiitiko chekutanga tinochiona apo ari muGetsemane navadzidzi vake, apo akava nokuti, "Baba, dai zvaibvira, mukombe uyu waipfuura zvawo, asi kusiri kuda kwangu, asi kwenyu imi Baba." Chiitiko chepiri tinochiona apo akadanidzira neinzwi guru achiti, "Mwari wangu, Mwari wangu mandisiirwiko?"
Mushure mekuzadziswa kwesungano itsva, tinova nokuverenga muna vaHeberu kuti panenge pava nokuregererwa (kwesungano itswa) hapachafaniri kuva nechibairo. Ishe wedu wakatifira paMuchinjikwa kuti zvitadzo zvedu zvose zvive nokuregererwa. Kana ndichiti zvitadzo zvedu zvose ndinoreveiko? Ndinoreva kuti zvitadzo zvedu zvakare, zvanhasi nezvose zvatichaita kudakara pazuva rekufa kwedu. Ko, zvino unofanira kuira seiko kuti uve nokuponeswa? Unofanira badzi kuva nokutenda kuevhangeri yeruponeso, yemvura noMweya.
Kana uchitenda kuevhangeri yemvura noMweya, unova nokugamuchira chipo choMweya Mutsvene pakarepo. Kana Mweya Mutsvene agara mauri, achava nokufamba newe nguva dzose. Mweya Mutsvene achava nokuvhenekera mukati memoyo wako. Tose tinoziva kuti rima rinotiza pakarepo kana chiyedza chichinge chabakidzwa. Rima rose rinenge riri mumoyo mako richava nokutiza kana Mweya Mutsvene, uyo anova chiedza, achinge agara mauri. Tinoziva tose kuti rima rinounza mabasa aro akaipa, ayo atinodoma kuti mabasa erima. Kana chiedza chichinge chauya, mabasa erima achava nekutiza pamwechete nerima. Chiedza chichava nokuuya nemabasa akanaka. Tendai kuevhangeri yezvokwadi kuti Mweya Mutsvene ave nokugara mauri.
Kana Mweya mutsvene agara mauri, uchava nokuyanana naye. Kana Mweya Mutsvene agara mauri uchava nokuwadzana naye. Kana Mweya Mutsvene agara mauri, uchava nokubatira pamwechete nechechi. Uchava nokuparidzira evhangeri yezvokwadi yemvura noMweya kumarudzi ose. Kuparidzira evhangeri yemvuya noMweya ndiko kuzadzikisa Kutumwa Kukuru kwakataurwa nezvako muna Mateo 28:20.
Ngatishandire pamwechete nekereke kuti tiparidzire evhangeri yezvokwadi kumativi mana enyika.
Wenyu ari mumuzambiringa waShe